"ဟင်းလင်းခွင် နှင့် အတွေး"
အညာ ကျေးလက်ဒေသနေ တောင်သူလယ်သမားကြီးတစ်ဦး၏ လယ်တဲလေးကို ရေးဖွဲ့ထားသော ဒွေးချိုး ကဗျာလေးသည် ယနေ့တိုင် စိတ်အတွေးထဲ စွဲထင်နေဆဲ။ ထနောင်းပင်ညီနောင်ထံမှ ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့ ကူလိုက်သော ချိုးလေးနှစ်ကောင်၊ ထူထူဆိုင်းဆိုင်း ပေါက်ရောက်နေမည့် ပဒေါ်မြက်အုပ်များနှင့် လယ်တဲငယ်ငယ်လေးအကြောင်းကို ကဗျာလေးက ပြောပြနေသည်။ ကဗျာလေးကို ရွတ်လိုက်တာနှင့် လယ်တဲငယ်ငယ်၊ ထနောင်းညီနောင်နှင့် ချိုးမောင်နှံတို့ဖြင့် အညာဒေသ ဟင်းလင်းခွင်လေး၏ အသွင်အပြင်ကို မြင်ယောင်မိစေသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ခေတ်ကို ထင်ဟပ်နေသော၊ အချိန် ကာလ နေရာ ဒေသ တို့ကို ပြောပြောနေသော ကဗျာလေးဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းသော ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို စိတ်ဝိဉာဉ်တွင် ခံစားတွေ့နိုင်သည်။ သို့ဆိုလျှင် ဟင်းလင်းပြင် တစ်ခုအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော အတွေးအမြင်၊ အသိ၊ အယူအဆ၊ တန်ဖိုးထားမှု၊ နားလည်မှု၊ ယုံကြည်မှု၊ လက်ခံလိုက်မှု၊ အသုံးချမှု၊ လွင့်မြောမှု၊ အိပ်မက်ဆန်မှု၊ ထိတွေ့မှု များသည် စာပေ၊ ဂီတ အနုပညာများဖြင့် ပုံတူကူးရေးနိုင်သည်လား။ ပန်းချီ၊ ပန်းပုများဖြင့် အသွင်ပြောင်း ထုဆစ်နိုင်သည်လား။ ဟင်းလင်းခွင်တို့အား ဖန်တီးအလှဆင်မှုသည် အနုပညာလေလား၊ အတတ်ပညာလေလား။ ရိုးရှင်းသော ကဗျာလေးအပေါ် အတွေးနယ်ချဲ့မှုများစွာဖြင့် စိုးမိုးသွားမိသည်။ သေချာသည်မှာ ခံစားသိဖြင့် သိနိုင်သော အနုပညာ၊ လိုအပ်မှုဖြင့် ဖန်တီးနိုင်သော အတတ်ပညာများသည် လူသားတို့၏ နှလုံးအိမ်ကို အစဉ်ထာဝရ စွဲဆောင်နေမည်သာ။
"ဟင်းလင်းခွင် နှင့် ရှင်းလင်းဖြေဆိုမည့် ပြဿနာ"
Fine Arts အနုပညာတို့သည် သူ့ဆန္ဒ သူ့သဘောဆောင်ပြီး ခံစားမှုကို လွတ်လပ်စွာ ဖန်တီးခွင့်ရှိသည်။ အနုပညာသည် သူ့ဘဝ၊ ခံစားမှုကို ဖော်ထုတ်ခြင်းသည် သူ့အလုပ်ဖြစ်သည်။ သူ၏ နောက်ဆုံး workdone, သူ့ဖန်တီးမှု၏ နောက်ဆုံးအဖြေသည် သူတည်း တစ်ယောက်နှင့်သာ သက်ဆိုင်နေသည်။ ဟင်းလင်းကို ဖွဲ့ဆိုသူ ဒီဇိုင်းပညာရှင်တို့အတွက်မှု သူ၏ တစ်သီးပုဂ္ဂလိက ဆန္ဒထက် Client (အလုပ် အပ်နှံသူ) ၏ စိတ်ကူးနှင့် လိုအပ်မှုကို စနစ်တကျ အဖြေရှာ၍ လူအများလက်ခံအောင် ဖန်တီးပေးမှုသည် သူ့ဘဝ၊ သူ့အလုပ်၊ သူ့အနုပညာ ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် ဟင်းလင်းခွင် (Space) တစ်ခုကို ဖန်တီးပြုလုပ်ခြင်းသည် ပြဿနာတစ်ခုအား ရှင်းလင်းဖြေဆိုခြင်းနှင့် သဏ္ဌာန်တူပေသည်။ ဟင်းလင်းတစ်ခု၏ ထုထည်အတွင်း ကျွန်တော်တို့ လှုပ်ရှားသွားလာနေထိုင်သည်။
ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးကို ကြည့်မြင်ခံစားလိုသည်။ နှစ်လိုဖွယ် အသံအမျိုးမျိုးကို ဖန်တီးနားဆင်လိုသည်။ လေပြေလေညင်းလေးများ ထိကပါး ရိကပါး ကျီစားတာကို ခံစားနိုင်လိုသည်။ နေရောင်ခြည်မှ တဆင့်ရရှိသော နွေးထွေးသော အထိအတွေ့ကို လိုလားသည်။ အချိန်တန် ပွင့်လန်းလာသော့ ပန်းရနံ့လေးများကို ခံစားလိုသည်။ ထို့အတွက် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခြင်းသည် ဟင်းလင်းပြင်အတွင်း အသုံးပြုသူများ၏ အဆင်ပြေချောမွေ့မှု , အသုံးဝင် အကျိုးရှိမှု (functional improvement) ၊ ထို Space ၏ လှုပ်ရှားသက်ဝင်မှု , သာယာငြိမ်းချမ်းမှု (Aesthetic enrichment ) နှင့် စိတ်အတွေး၏ တောင့်တမှုကို ဖြည့်စွက်ပေးမှု (Psychological enhancement) တို့အား စနစ်တကျ အဖြေရှာ ဖော်ထုတ်ခြင်းဟု ဆိုရပေမည်။ Space သည် ဒီဇိုင်နာ တစ်ယောက်အတွက် ပင်မ ပစ္စည်းတစ်ခု၊ Space တစ်ခုအတွင်း နေထိုင်သူများ၏ လှုပ်ရှားမှု၊ သဘောထား၊ ခံစားမှုနှင့် ထိုသူတို့၏ သီးသန့် ဖြစ်တည်မှုတို့အပေါ် အခြေတည်၍ လိုအပ်ချက်များကို အဖြေရှာခြင်းသည် ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက် လိုက်နာရမည့် အခြေခံ သဘောတရားပင် ဖြစ်သည်။
ဒီဇိုင်းတစ်ခုသည် ပြည့်စုံသည်။ အကြောင်းမှာ လိုအပ်ချက်များအားလုံး ချောချောမွေ့မွေ့ရရှိ၍ ဖြစ်ပေမည်။ ဒီဇိုင်းတစ်ခုသည် ကောင်းမွန်မည်။ အကြောင်းမှာ စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်၍ ကြာရှည်ခံ အကျိုးရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။ ဒီဇိုင်းတစ်ခုသည် နှစ်လိုဖွယ် ရှိသည်။ အကြောင်းမှာ စိတ်အတွေး၏ တောင့်တမှုကို ဖြည့်စွက်ပေးနေသည်။ ဒီဇိုင်းတစ်ခုသည် အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ အကြောင်းမှာ ဖော်ပြလိုသော သဘောထားနှင့် အချိန်ကာလတို့ကို ညွှန်းဆိုနေသည်။ သို့သော် ဟင်းလင်းခွင်တစ်ခုအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော အဖြေတစ်ခုသည် မည်သည့်အခါမှ ရရှိမည် မဟုတ်ချေ။ လိုအပ်မှုနှင့် ဖန်တီးလိုမှုတို့ကိုသာ အချိုးညီညီ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ခြင်းသည် ဒီဇိုင်းတစ်ခု ဖန်တီးခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ဒီဇိုင်းတစ်ခုသည် တစ်နည်းအားဖြင့် ဟင်းလင်းခွင် တစ်ခုအတွက် ရှင်းလင်းဖြေဆိုရမည့် ပြဿနာတစ်ခုပင် ဖြစ်ပေသည်။
"ဟင်းလင်းခွင် နှင့် ဒီဇိုင်းပညာရှင်"
တိုးတက်လာသော လူမှုပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းနယ်ပယ်တွင် လူသားများသည် မိမိတို့ နေထိုင် လုပ်ကိုင်နေရသော အဆောက်အဦးများအား အမိုးအကာ လုံရုံဟူသော အနေအထားမျိုးတွင် ရောင့်ရဲတင်းတိမ် နေခြင်း မရှိတော့ပဲ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့၊ တစ်ရာသီထက် တစ်ရာသီ ပိုမိုဆန်းသစ်သော အဆင်တန်ဆာ ဒီဇိုင်းများဖြင့် ဖန်တီးပြုလုပ်ရန် ဆန္ဒရှိလာကြသည်။ ရှေးခေတ် အတီတေကလည်း ရှေးခေတ်အလျောက်၊ တိုးတက်သော နည်းပညာခေတ်တွင်လည်း နည်းပညာ ဖန်တီးမှုများအလျောက် လူသားတို့၏ လိုအပ်ချက် စိတ်ဆန္ဒတို့မှာလည်း တစ်ဆထက်တစ်ဆ မြင့်မားလာကြပေသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် ထိုအရာသည် ခေတ်၏ လိုအပ်ချက် မဟုတ်၊ စနစ်အတွက် လိုအပ်ချက်မဟုတ်၊ "လူ"ဆိုသော အသစ် အသစ်ကိုမှ ခုံမင်တတ်သော သဘောထားကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။ လူသားတို့၏ အသစ်၊ အသစ်သော ဆန္ဒများနှင့် လိုလားချက်များအတွက် ထိုထို လိုအပ်ချက်များကို ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အဝ ပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားခြင်းသည် ဒီဇိုင်နာများ၏ အဓိက တာဝန်ပင် ဖြစ်သည်။
ဒီဇိုင်နာနှင့်အတူ လုပ်ငန်းခွင်၏ စံသက်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သော ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ လိုအပ်လာပါသည်။ ဆန်းသစ်မှုသည် ကွဲလွဲမှု မဟုတ်၊ ကွဲလွဲခြင်းသည် ဆန်းသစ်ခြင်း မမည်။ နေရာ၊ ဒေသ၊ ကာလအလိုက်
ကွဲပြားခြားနားလာသော လူသားတို့၏ စိတ်ဆန္ဒကို အပြည့်ဝဆုံး ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ဟန်ချက်ညီလှုပ်ရှားနိုင်သော၊ စနစ်တကျ လေ့လာသုံးသပ်မှုများဖြင့် ရှုထောင့် အဖုံဖုံမှ အတူတကွ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်သော ပညာရှင်များ အတူတကွ ပေါင်းစည်းလုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်လာပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်များမှာလည်း လုပ်ငန်းခွင် စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော အဖွဲ့အစည်းများအား ရှာဖွေလာတတ်ကြသည်။ ၄င်းတို့သည် တိုးတက်လာသည့် အမြင်တို့နှင့်အညီ လူသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ သီးသန့် ရွေးချယ်ခြင်းဟူသော သဘောထားကွဲလွဲခြင်းများကို သည်းခံညှိနှိုင်းကာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသော အဆောက်အဦးများကို ဖန်တီးပေးနိုင်ကြမည့်၊ ယခုလက်ရှိ ပြောင်းလဲနေသော နည်းပညာရပ်များအား အမြဲတစ်စေ တီထွင်ကြံဆနေမည့် ဒီဇိုင်းပညာရှင်များကိုသာ လိုလားလာသည်။ ထိုအရာများသည် ဒီဇိုင်းပညာရှင်များအတွက် ပြောင်းလဲနေသော ခေတ်စနစ် အခြေအနေများကို မျက်ခြေအပျက်မခံပဲ အဆောက်အဦးတို့၏ ပြောင်းလဲခြင်းပုံစံ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ဆန်းသစ်မှု၊ ထပ်မံဖြည့်စွက်မည့် ပစ္စည်းများကို လူသားတို့၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ထပ်တူကျအောင် အစဉ်တစိုက် ကြိုးပမ်းနေသင့်ကြောင်း ဖိအားပေးလျှက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် ဒီဇိုင်းပညာရှင် တစ်ယောက်သည် တစ်ခုခုကို ဖန်တီးသောနေရာတွင် တစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေသော ရှုခင်းကိုပင် အမြင် ပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်း ရှိရမည့်အပြင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထဲမှပင် ဆန်းပြားသော အသစ်အဆန်းတစ်ခု အသွင်ကို ဖန်တီးကာ အစားထိုး အသုံးပြုနိုင်အောင် ဖန်တီးမှုများ လိုအပ်လာသည်။
ဒီဇိုင်းဖန်တီးမှု အတတ်ပညာသည် အလျား၊ အနံ၊ အမြင့် ဟူသော ထုထည် ပမာဏများနှင့် ဆက်စပ်တွေးတော ကြံဆခြင်း ဖြစ်သော်လည်း အချိန်ဟူသည့် အတိုင်းအတာ ပမာဏနှင့် အဆောက်အအုံများ၏ ဆက်စပ်မှုကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကာလအတွင်း သင့်လျော်သော ဒီဇိုင်းကို တီထွင်နိုင်ပေးရမည်။ ထို့အတူ နေထိုင်သည့် ကာလတစ်လျောက် Client ၏ လက်ခံမှုကို ရရှိနေအောင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ရမည်။ ဟင်းလင်းကို ဒီဇိုင်း ဖန်တီးသူ၏ အမြင်၊ ကြည့်ရှုခံစားသူနှင့် ထိုဖန်တီးသော ဟင်းလင်းအတွင်း သက်ဝင်နေထိုင်သူတို့၏ တုံ့ပြန်မှုသည် အချိန်တစ်ခုနှင့်အတူ စီးဆင်းနေပေမည်။ အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ ထင်ရှားသော လက္ခဏာ အစိတ်အပိုင်း ( ၆ )ရပ် ဖြစ်သည့် တည်နေရာ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ကိုယ်ထည်အခွံ၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ နေရာလွတ်နှင့် စီမံချက်တို့ကို ပြည့်ဝစွာ နားလည်ရန် လိုအပ်ပေသည်။ ဒီဇိုင်းပညာရှင်များသည် နေရာလွတ်လပ်မှုနှင့် စီမံချက်အနေအထားတို့ကို အာရုံစူးစိုက်နေစဉ် ကျန်သော အချက်အလက်များအတွက် ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံစွာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေရန်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပေသည်။ ထိုသို့ စဉ်းစား တွေးခေါ်မှုများသည် လက်တွေ့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တွင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်အတွက် အမြဲတစ်စေ လေ့လာ လေ့ကျင့်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက် အနေဖြင့် ၅နှစ်စာအတွက် ပြသနာများကို ကြိုတင်တွေးတော အဖြေရှာဖွေရာတွင် ၅မိနစ်အတွင်း ဖြေရှင်းလိုက်သော ဖြစ်ကတတ်ဆန်း လုပ်ရပ်မျိုးကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်သင့်ပေသည်။
ဒီဇိုင်းပညာရပ်ကို လေ့လာသောအခါမှာ ပညာရပ်များ၏ သီအိုရီ သဘောတရားနှင့် ဒီဇိုင်းတွေကို လေ့လာရသကဲ့သို့ ဒီဇိုင်နာများထံမှလည်း ထိုသူတို့၏ ဒီဇိုင်းအတွေးအခေါ်များကို အပြန်အလှန် လေ့လာရကြောင်း ဖတ်မှတ်ဖူးပါသည်။ ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးသည် အခြေခံ ဒီဇိုင်းသဘောတရားများကို သီအိုရီများမှလည်း ဖော်ထုတ်လေ့လာရသည်။ အခြား အခြားသော ဒီဇိုင်နာများ၏ ဖန်တီးမှုများမှလည်း ထပ်ဆင့်လေ့လာရသည်။ ဒီဇိုင်းပညာရှင် တစ်ယောက်သည် စွယ်စုံရသော အတတ်ပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် မလိုအပ်သော်လည်း မိမိ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အရာရာ အားလုံးကို ခြုံငုံ သုံးသပ်တတ်နိုင်ရပေမည်။ တိုးတက်နေသော ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူဦးရေ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ အဆောက်အဦးများ ပြွတ်သိပ်လာမှုကြောင့် လက်တွေ့အသုံးကျသော အယူအဆ၊ သဘောတရားနည်းများကို စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှသာ ထူးချွှန်သော ဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပေမည်။
"ဟင်းလင်းခွင် နှင့် နေထိုင်မှု အနုပညာ"
ဟင်းလင်းကို ဖွဲ့ဆိုသူ ဒီဇိုင်နာတို့အတွက် ဒီဇိုင်း၏ အမှန်တရားသည် စီးပွားရေးဆန်သော အနုပညာတစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ လိုအပ်ချက်ကို အဖြေရှာရမည့် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ ဒီဇိုင်နာသည် ဒီဇိုင်းအခြေခံ သဘောတရားများ (Element of Design) ကိုလည်း သေချာ နားလည် အသုံးချနိုင်ရမည်။ မိမိ အသုံးပြုမည့် material များ၏ သွင်ပြင် (texture) ကိုလည်း ဂဃဏန သိထားရမည်။ ဟင်းလင်း (Space) ကို စနစ်တကျ အသုံးချနိုင်ရမည်။ အမြင်လှည့်စားမှုအပေါ် ပြောင်းလဲသွားတတ်သည့် အခြေခံ ပြောင်းလဲခြင်းများကိုလည်း ကျွမ်းကျင်ရမည်။ နရီ၊ ဟန်ချက်နှင့် အချိုးကျမှုတို့ကိုလည်း ကစားနိုင်ရမည်။ သူဖန်တီးသော ဒီဇိုင်းသည် အနုပညာတစ်ခု ဖြစ်သလို ထုတ်ကုန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်း လက်ခံထားရပေမည်။
သဘာဝ၏ အလှအပသည်လည်း ဟင်းလင်းခွင်တစ်ခုအတွင်း၊ လူသားတို့၏ ဖန်တီးဖွဲ့တည်မှုသည်လည်း ဟင်းလင်းခွင်တစ်ခုအတွင်း။ တေးဆိုနေသော လေနုအေး၊ နွေးထွေးသော နေရောင်ခြည်၊ ယိမ်းနွဲ့နေသော ပန်းခင်းများနှင့် မွှေးထုံရစ်သော ပတ်ဝန်းကျင်သည် သဘာဝ၏ ရသကို ဖွင့်ဟနေသည်။ လင်းလက်သော နီယွန်မီးများနှင့် ကြည်လင်သော မှန်ချပ်များအကြား ရပ်တည်နေသော စက်မှုထုတ်လုပ်မှု ထုထည်တစ်ချို့သည် လူသားတို့၏ ဖန်တီးမှုတစ်ချို့ကို ပြသနေသည်။ နေရောင်ခြည်အလင်းသည် အချိန်ကာလအလိုက် အမှိန်အဖျော့ ပြောင်းလဲလျက်။ နီယွန်မီး၊ မာကျူရီမီးတို့၏ အလင်းသည်လည်း ဖန်တီးမှုအလိုက် အတိုးအနှုတ် ပြောင်းလဲလျက်။ လိုအပ်မှုနှင့် စိတ်ကူးဆန္ဒတို့ကို အချိုးညီညီ ပေါင်းစပ်ထားသော ဟင်းလင်းခွင်တို့အား ဖန်တီးမှုသည် အနုပညာတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ အတတ်ပညာလည်းဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် Applied Art (သို့) အသုံးချ အနုပညာ။ ထို ဟင်းလင်းခွင်တို့အား ဖန်တီးသောသူများသည် Technician (သို့) Designer (သို့) Artist (သို့) နေထိုင်မှုတစ်ခုအား ဖန်တီးသော အနုပညာခံစား အတတ်ပညာရှင်များ ဟု ခေါ်ဝေါ်ပညတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
“နေလုံးရယ်နီ တိမ်ပန်းချီ နေသွေးနဲ့၊ နတ်ရေးသည်သို့။ ဒီအကျပေမို့ အလှ လတာပြင်က၊ ကျူရိုးရှင်လှေကလေးနဲ့ မျှော်ငေးလို လို့။” ဆည်းဆာချိန် တိမ်ပန်းချီကားသည် နေသွေးနှင့် နတ်ရေးထားလေသည်လား။ ဒီရေလည်း ကျလာပြီမို့ ပေါ်လာသော လတာပြင်မှာ ကဗျာအတွင်းမှ ကျူရိုးရှင်သည် နတ်ရေးသော တိမ်ပန်းချီကို လှေတစ်စင်းနှင့် မျှော်ငေးရသည်ကို နှစ်သက်ကောင်း နှစ်သက်မည်။ အချို့ ကျူရိုးရှင်တို့ကတော့ဖြင့် သာသာယာယာ ညနေခင်းမျိုးတွင် လတာပြင်၏ အစွန်းတစ်ဖက်နား ငါးပျံတစ်ချို့က ညှာညှာတာတာမရှိ၊ ဘယ်ပြောင်းညာပြန် ဂျွမ်းထိုးလိုက်၊ ဘုတ်မက ခုနှစ်သံချီအောင် လွမ်းတေးတွေဆိုလိုက် လုပ်နေသည်ကိုမှ ခံစားလိုကောင်း ခံစားလိုလိမ့်မည်။ ဆရာ ဇော်ဂျီကတော့ အဆုံးသတ် သူ့ကဗျာမှာ “အိုအချင်း ကျူရိုးရှင်။ သူ့မူယာသူ့အတင်း၊ မင်းဆိုခဲ့စဉ်။ မင်းကိုယ်လဲ မင်းပင်လျင်၊ ဘာထင်လို့လေလဲ။ မဗေဒါစုန်ဆန်လမ်းမှာ ၊ ပန်းခဲ့သည်ပဲ။” ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ဟင်းလင်းကို ဖန်တီးခြင်းသည်လည်း
ကျူရိုးရှင်နှင့် အလား သဏ္ဌာန်တူပေတော့သည်။ အကန့်အသတ်မဲ့သော ဒီဇိုင်းလောကအတွင်း စုန်ဆန်ကူးခတ်ရင်း မောပန်းလိုက်၊ မိမိ ဖန်တီးမှုလေးအပေါ် ပြန်လည်ကြည့်ရှုရင်း ကျေနပ်ပီတိဖြစ်လိုက်နှင့် ကိုယ်တိုင်လည်း ကူးခတ်ရပေဦးမည်။ သူတပါး ဖန်တီးမှုများကိုလည်း လေ့လာခံစားရင်း မုဒိတာထား ကျေနပ်ရပေဦးမည်။
Written by DESIGN ideology
Interior Design (Arch.08012) lecture Notes
Interior Design Handbook of Professional Practice by Cindy Coleman (Mimarlìk)
Interior Deisgn Illustrated 1987 by Francis D.K.Ching
Posted by MTZO at 10:46 AM No comments:
Labels: Design ideology News Letter
သဘာဝမှ ပုံသဏ္ဍာန်များ(Shapes from nature)
ဗိသုကာ ဆိုင်ရာ ထုသွင် Forms များနှင့် ပုံသဏ္ဍာန် Shapes များဖြစ်တဲ့ အမျိုးမျိုးသော Cone, Cube, cylinder, sphere နှင့် pyramid အစရှိတဲ့ ပုံများအတွက် သဘာဝလောကကြီးဟာ စံပြုစရာ Model တစ်ခုလိုပါပဲ။ ထို့အပြင် ဂျီသြမေတြီ ပုံမဟုတ်တဲ့ ဗိသုကာ Forms များအတွက်လည်း သဘာဝတရားကြီးသာ အတုယူစရာ၊ နမူနာယူစရာ၊ Model ဖြစ်နေပါတယ်။ (ယူကလစ်ဒီရမ်)
သဘာဝတရားဆိုတာ ဘာများပါလိမ့် ဆိုတဲ့ အမေးများရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်... ဒီနေရာမှာ ရုပ်ဝတ္တုပိုင်း အားဖြင့် လူသားတို့ ဖန်တီးထားတာ မဟုတ်တဲ့ ကမ္ဘာမြေပြင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အစိတ်အပိုင်း အားလုံးကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဥပမာ ဆိုရရင် နေ၊ လ၊ နက္ခတ် တာရာများ အပါအဝင် ကောင်းကင်ပြင်ကြီး နှင့် မိုးသား တိမ်လိပ်၊ တိမ်စိုင်များ။ ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်ရှိ သစ်ပင်၊ ပန်းပင်၊ သစ်သီး၊ သစ်ဥ၊ သစ်ရွက်၊ သစ်ဖက် အစရှိတဲ့ အရာများ၊ ကျောက်တုံး၊ ကျောက်စိုင်၊ ကျောက်ခဲ အစရှိတဲ့ အရာများ၊ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ ခရုခွံ၊ ကမာခွံ အစရှိတဲ့ သက်ရှိ နှင့် သက်မဲ့ရုပ်ကြွင်းများ။ လူသားနှင့် သက်ရှိတို့၏ ဖန်တီးမှုကြောင့် မဟုတ်ပဲ ဆန်းကြယ်သော သဘာဝ ဖြစ်စဉ်အရ အလိုအလျှောက် ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေတဲ့ အထက်ပါ အရာအားလုံးပါပဲ။
အဲဒီလို သဘာဝ ပစ္စည်းတွေကနေ ကျနော်တို့အတွက် သစ်ဆန်းတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေ ဖန်တီးနိုင်လာပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ အရာတွေကို အနီးကပ်လေ့လာကြည့်ခြင်း၊ ကြီးမားတဲ့ အရာတွေကို ဝေးကွာတဲ့ နေရာကနေ ကြည့်ခြင်း အစရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကနေ Shape, color, texture နှင့် Form အစရှိတဲ့ အရာတွေအတွက် အတွေးအမြင်တွေ ပုံဖော်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ရဲ့ အင်္ကျ ီအဝတ်အစားများပေါ်သို့ကျရောက်လာတဲ့ နှင်းပွင့် နှင်းစက်ကလေးများကို မှန်ဘီလူးဖြင့် အဆချဲ့ကြည့်မည်ဆိုလျှင် အဲဒီနှင်းပွင့်လေးတွေဟာ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု မတူညီပေမယ့် တူညီတဲ့ သဏ္ဍာန်ရှိနေတာကို တွေ့နိုင်မှာပါ။ ဥပမာဆိုရရင် ခြောက်ထောင့် ကြယ်ပုံစံကဲ့သို့သော ပုံစံလေးများ ဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီပုံလေးတွေဟာ ဗဟိုကနေ အပြင်ကို ဗဟုဂံပုံ အချိုးညီ ဖြာထွက်နေတဲ့ ပုံများလည်း ဖြစ်နေပါမယ်။ အဲဒီလို နှင်းပွင့် သဏ္ဍာန်လေးလိုပဲ ၁၂ ရာစုအလယ်ပိုင်းက Gothic cathedrals ဂိုးသစ် ဘုရားကျောင်းများမှာ (နှင်းဆီ ပြူတင်း) Rose windows များကို တပ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။
အောက်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့ အီရက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Great Mosque of Samarra ဗလီဘုရားရှိခိုး ကျောင်းကြီးရဲ့ ခွေလိမ်ရစ်တတ်သွားသော ခရုပတ်ပုံ နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ တက္ကဆက်ပြည်နယ် ဒေးလတ်စ် မြို့ (Dalas)ရှိ ဗိသုကာ Phillip Johnson နှင့် John Burgee တို့တည်ဆောက်ထားတဲ့ Thankisgiving square chapel ရဲ့ အပြင်ဒီဇိုင်းနှင့် အတွင်း ဒီဇိုင်းတို့ဟာ သဘာဝတရားက ဖန်တီးထားတဲ့ ပင်လယ်ခရု တစ်ခုရဲ့ သဏ္ဍာကို ရယူတည်ဆောက်ထားခြင်းပါ။
Thankisgiving square chapel
အမေရိကန်လူမျိုး အင်ဂျင်နီယာ engineer, စာရေးဆရာ author, ဒီဇိုင်နာ designer, တီထွင်သူ inventor နှင့် စက်မှုစွမ်းအားနှင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် လှုပ်ရှားမှုကို အသားပေးသရုပ်ဖေါ်သော (၂ဝရာစု နှစ်ဦးပိုင်းမှ ) ပန်းချီပန်းပုအနုပညာရှင်(futurist) အစရှိတဲ့ ဂုဏ်ထူးဝိသေသများနှင့် ပြည့်စုံတဲ့ Richard Buckminster “Bucky” Fuller (July 12, 1895 – July 1, 1983) ဟာ အဲဒီလို သဘာဝတရားရဲ့ပုံစံမှာ အိုင်ဒီယာ ရယူပြီး Godesic dome လို့ခေါ်တဲ့ Structure တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ ဒီဇိုင်းဟာ Alveoli cell တွေနှင့် ပုံသဏ္ဍာန် ဆင်တူတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ (ကျနော့အမြင်တော့ ပျားအုံပုံသဏ္ဍာန့် နဲ့ တူတယ်ထင်မိပါတယ်...။) သူ့အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ ထုလုံးခုံးသံဗရာခြမ်းကြီးရဲ့ အခြေခံ အလုံးပုံစံရဖို့ ဖြောင့်တန်းတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး Material တွေ အသုံးပြုပြီး အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေ ကြံဆတီထွင် စီစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက သြစတြီးယား နိုင်ငံရှိ ဆစ်ဒနီပြဇတ်ရုံ (The Opera House in Sydney, Austrila) ရဲ့ အမိုးတွေဟာ ခရုခွံနှင့် သဏ္ဍာန်တူ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။
Andre' Morisseau တည်ဆောက်ထားတဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဈေးတစ်ခုမှာတော့ သမုဒ္ဒရာထဲမှာ တွေ့နိုင်တဲ့ ပင်လယ်ခရုဖြူတစ်မျိုးနှင့် သဏ္ဍာန်တူ ပါတယ်။ အောက်က ပုံတွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
Market Place ,Royan, France; Andre' Morisseau
ကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်တွေဟာ သဘာဝ၀န်းကျင်မှာ အရေးပါတဲ့ အရာတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောက်သားတွေကို အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုထားတဲ့ အဆောက်အအုံတွေဟာ ပိုပြီး သဘာဝဆန်ပါတယ်။
အပေါ်က ပုံလေးက တော့ ရှေးဦးသဘာဝကျောက်တုံးအိမ် ရိုးရိုးလေး တစ်လုံးပါ။ အဲဒီပုံဟာ အခြေခံ သေတ္တာ တစ်လုံးပုံသဏ္ဍာန်ပဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ ကျောက်တုံး မျက်နှာပြင်တွေက တော့ ဘေးက သစ်ပင်တွေ၊ သစ်ကိုင်းတွေ အစရှိတဲ့ သဘာဝ အရာတွေနှင့် ဟာမိုနီကျလိုက်ဖက် တင့်တယ်နေပါတယ်။
အောက်က ပုံမှာ မြင်ရတဲ့ ဆက်ပြာဘူဘောင်းလေးတွေ ဆပ်ပြာမြှုပ်လေးတွေကို တွေ့ဖူးကြမှာပါ။
အဲဒီလိုပဲ ဆပ်ပြာပူပေါင်းလေးတွေ ကို သေချာ ဂရုစိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် တစ်ခုနှင့် တစ်ခု တူမယောင်နှင့် ကွဲနေတာကို သတိထားမိနိုင်ပါတယ်။
သလင်းကျောက်လို့ ကျနော်တို့တွေ သိနေတဲ့ Crystal ကျောက်ကလေးတွေမှာ သဘာဝမှာရှိတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်တွေ အတော်များများ ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ပုံသွင်တွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဂျီသြမေတြီပုံတွေဖြစ်တဲ့ regular shape, straight line အစရှိတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေ အဲဒီသလင်းကျောက်မှာ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု တူညီသယောင်နှင့် မတူညီပဲ ကွဲပြားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဗိသုကာတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေ ပြုလုပ်ရာမှာ Boxes ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်သာ အများအားဖြင့် ပြုလုပ်ကြခြင်းဟာ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ လုပ်နိုင်ကြလို့ပါ။ T-square၊ Compasses အစရှိတဲ့ ပုံဆွဲ ကိရိယာများနှင့် အလွယ်တကူ အဖြောင့်မျဉ်းများ အမတ်မျဉ်းများ ဆွဲသားနိုင်သောကြောင့် ပြုလုပ်ကြခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် များသော အားဖြင့် သဘာဝရဲ့ တည်ဆောက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်တွေ မှီးယူခြင်းကို တတ်နိုင်သမျှ လစ်လျှူရှုတတ်ကြပါတယ်။ လွယ်ကူတဲ့ အဖြောင့် ဒီဇိုင်းများဖြင့်သာ အဆောက်အအုံများကို တည်ဆောက်တတ်ကြပါတယ်။
သို့သော်လည်း အထက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အီတလီနိုင်ငံ(Italy), Cisternino အနီးနား မှာရှိတဲ့ Rural community, Trulli ဆိုတဲ့ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ထားမှုကတော့ တစ်ခုလုံးအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုတွေ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာတွေ နှင့် အသိအမြင် နည်းပညာ အသစ်တွေ လို့အပ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုအိမ်မျိုးတွေကတော့ ပျော့ပြောင်းတဲ့ဟန်၊ မာကြောကြမ်းတမ်းမှုမရှိတဲ့ သဏ္ဍာန်တွေကြောင့်
သဘာဝတရားနှင့် ပိုမို နီးစပ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အဆောက်အအုံ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ဆင်တူသဏ္ဍာန်ရှိသော်လည်း အကုန့်အသတ် မရှိတဲ့ အလွှဲအပြောင်းတွေကြောင့် နှစ်သက်စဖွယ်ဖြစ်နေပါတယ်။
တခါတလေမှာ ကျနော်တို့တွေရဲ့ အဆောက်အအုံမှာ သဘာဝတရားရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်စေလိုသောစိတ်ခံစားမှုအတွက် တစ်ခုတည်းသော ဖန်းတီးနိုင်တဲ့ ပညာကတော့ Landscape Architecture မြေခင်းဗိသုကာ ပညာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းပင်တွေ၊ မြက်ခင်းတွေ၊ ချုံပင်တွေ၊ သစ်ပင်တွေ၊ သစ်ကပ်နွယ်ပင်တွေ အစရှိတဲ့ အပင်များ စိုက်ပျိူးပြုပြင်ခြင်းဖြင့် နေထိုင်တဲ့သူတွေကို နွေးထွေးမှု၊ စိတ်ချမ်းသာမှု၊ ဆွဲဆောင်နိုင်မှု၊ သာယာကြည်နူးမှုစတဲ့ စိတ်ကျေနပ်စေမှုများကို သာမန် အကြမ်းထည် အဆောက်အအုံထက် ပိုမိုပေးစွမး်နိုင်ပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့် ဆိုရရင် ကျနော်တို့ အနီးပတ်ဝန်းကျင် အိမ်အနီးတဝိုက်၊ ရပ်ကွက်၊ မြို့ရွာ အနီးတဝိုက်၊ တောတောင်ရေမြေ၊ မြစ်၊ ချောင်း၊ အင်း၊ အိုင်၊ ပင်လယ်ကမ်းခြေ အစရှိတဲ့ နေရာများကို သွားရောက်လေ့လာ စူးစမ်း၍လည်းကောင်း၊ ဇီဝဗေဒနှင့် ခန္ဓာဗေဒ အစရှိသော စာအုပ်စာတမ်းများမှ ပုံစံများ ကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း သဘာဝတရားမှ ဖန်တီးထားသော သက်ရှိသက်မဲ့အရာဝတ္ထုများမှ ထူးခြားဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းများပြုလုပ်နိုင်စေကြောင်း။
Posted by MTZO at 9:37 AM No comments:
ပြင်ညီမျက်နှာပြင်ကို ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းအတော်များများမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ နံရံ(Walls)၊ မျက်နှာကြက်(Ceilings)၊ ကြမ်းခင်း(Floors)စတဲ့ အရာတွေလို မျက်နှာပြင် ညီညာပြန့်ပြူးနေတဲ့ အရာ အားလုံးကို ပြင်ညီမျက်နှာပြင်(Planes) များအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ ပြင်ညီဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲ။ ပြင်ညီတစ်ခုကို ဖန်တီးမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖန်တီးနိုင်မလဲ။ နားလည်လွယ်အောင် ပြောရမယ်ဆိုရင် မြေဖြူတစ်ချောင်းနှင့် သင်ပုန်းတစ်ချပ်ပေါ်မှာ မျဉ်း(line) တစ်ကြောင်းဆွဲသားနိုင်တယ်ဆိုတာ သိမှာပါ။ အဲဒီမြေဖြူကို သင်ပုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ လှဲကိုင်လိုက်ပြီး မျဉ်းဖြောင့် ဆွဲသလို ရှပ်တိုက် ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် ပြင်ညီ(plane) တစ်ခုအဖြစ်ဆွဲသားပြီး ဖြစ်သွားပါတယ်။
နောက် ဥပမာအနေနှင့် အပေါ်ကို ခေါက်တင်ထားသော ယင်းလိပ်(သို့မဟုတ်) လိုက်ကာ တစ်ခုကို အောက်သို့ဖြေချလိုက်ခြင်းဟာလည်း ပြင်ညီ(plane) တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်စေတာပါပဲ။
ပုံသဏ္ဍာန် shapes အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ ပြန့်ပြူးတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို ကျနော်တို့တွေ တွေ့ဖူးမြင်ဖူးကြမှာပါ။ အဲဒီ Shapes တွေဟာ ပြင်ညီ(plane) ရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲ။ ဒါကြောင့် ပြင်ညီ(plane) ဆိုတာကို အမည်အမျိုးမျိုးနှင့် ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် စက်ဝိုင်းပြင်ညီ(Circular Plane)၊ တြိဂံပြင်ညီ(Triangle Plane)၊ စတုဂံပြင်ညီ( Rectangular) စသည်ဖြင့် သီးခြားဂျီသြမေတြီပုံစံအနေနှင့် ရှိနေနိုင်သလို အဲဒီ ပုံစံတွေ မျိုးစုံပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ပြင်ညီတွေ အဖြစ်လည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ အောက်က ပုံလေးတွေကို နမူနာအဖြစ်လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီလို ပြင်ညီတွေကို ဗိသုကာပညာရှင်တွေဟာ အိမ်တွေ ၊ အဆောက်အအုံတွေ Plan ထုတ်ရာမှာ များစွာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ Overhead plane တွေအဖြစ် (အိမ်ခေါင်မိုး)Roof တွေ၊ မျက်နှာကြက် (Ceiling) တွေ၊ အဖြစ်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ Wall plane တွေအဖြစ် အိမ်တွေရဲ့ နံရံ(Wall)တွေ အဖြစ်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ တံခါးပေါက်(Door)၊ ပြူတင်းပေါက်(Window) တွေဟာ wall plane ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေပါပဲ။ Base plane တွေအဖြစ် မြေပြင်(Ground) သို့မဟုတ် ကြမ်းခင်း၊ ကြမ်းပြင် (Floor) တွေအဖြစ် တွေ့ရမှာပါ။ အဲဒီလို ပြင်ညီမျက်နှာပြင်တွေ အသုံးပြုရာမှာ ဘယ်လိုနေရာမှာပဲ အသုံးပြုပါစေ လျောစောက်(slope) အဖြစ်ပြုလုပ်၍ လည်းကောင်း၊ မြင့်တတ်(rise) သော အမတ် အထောင်အဖြစ် ပြုလုပ်၍ လည်းကောင်း၊ နိမ့်ချ(lower)၍ လည်းကောင်း အပြောင်းအလဲ တစ်မျိုးမျိုးပြုလုပ်ခြင်းကို ဗိသုကာတွေ ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ပိုမိုစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်စေ နိုင်သလို၊ လှပသော ၊ ဆန်းသစ်သော ပုံစံတွေ အဖြစ်လည်း ပြောင်းလဲ ဖန်တီးတတ်ကြပါတယ်။
Lines တွေကိုပေါင်းစပ်ပြီး shape အဖြစ်လုပ်နိုင်သလို Planes တွေပေါင်းစပ်ပြီး ထုသွင် form (volume) အဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ (Boundary and descriptive relationship)
Planes တွေကို volume(form) ပြုလုပ်ရန်အတွက် ပတ်လည်ကာရံပေးရပါတယ်။ Lines တွေကို shape ပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက် outline ဘောင် အဖြစ် အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါဟာ Boundary determiners အဖြစ် အသုံးပြုလိုက်ခြင်းပါ။
ဗိသုကာပညာဆိုတာ အမှန်တကယ်အားဖြင့် ထုသွင် နှင့် ဟင်းလင်းပြင်တို့ရဲ့ သုံးဖတ်မြင် ဆက်သွယ်ချက်ကို ဖော်ပြတဲ့ အမြင်ဆိုင်ရာ အနုပညာတစ်ရပ်ပါ။ ဒါကြောင့် Planes တွေဟာ ဗိသုကာပညာရပ်မှာ အလွန်အင်မတန်ကို အရေးပါလှပါတယ်။
Planes တွေရဲ့ မြင်ကွင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေးတစ်ရပ်ကတော့ ယင်းတို့ကို ဘောင်ခတ်ခြင်းဖြင့် volume နှင့် space တွေရဲ့ qualities များကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်းပါ။ planes တွေကို တွန့်ခြင်း၊ ခေါက်ခြင်း၊ လိပ်ခြင်း၊ အပေါက်ဖေါက်ခြင်း အစရှိတာတွေ ပြုလုပ်ပြီး ရိုးရိုးပြင်ညီမျက်နှာပြင်ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်အောင်၊ အဆန်းတကြယ်ဖြစ်အောင် စိတ်ကူးဆန်းသစ်သလို အသွင်ပြောင်းလဲ ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။
အခုလောက်ဆိုရင် ဗိသုကာ ပညာရပ်မှာ ပြင်ညီမျက်နှာပြင် Planes များရဲ့ အသုံးချမှု၊ အသုံးဝင်မှုတွေကို နားလည်သိရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Posted by MTZO at 12:41 PM No comments:
The Function(ဆောင်တာ) နှင့် The Form(ထုသွင်)
ဆရာ ဒေါက်တာလွင်အောင်က Function ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဆောင်တာ လို့ဘာသာပြန်ထားတာ ဗိသုကာဒဿန ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီကနေ ဆောင်တာဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးကို ယူထားပါတယ်။
အဆောက်အအုံတစ်လုံးရဲ့ ဆောင်တာ Function ဆိုတာ အဲဒီအဆောက်အအုံရဲ့ ထုသွင် Form အတွက် အင်မတန် လွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်... ဆိုသော အချက်ကို ကျနော်တို့တစ်တွေ သတိထားမိပါသလား။
အဲဒီအကြောင်းကို ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အဆောက်အအုံများထဲမှ ဆပ်ကပ်တဲများကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် Function နှင့် Form တို့အတွက် အကောင်းဆုံးနှင့် အသင့်လျှော်ဆုံး ဥပမာပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆပ်ကပ်တဲ တွေဟာ သာမန်မဟုတ်တဲ့ Function တွေလိုအပ်တဲ့ အဆောက်အအုံ တစ်မျိုးပါ။ ဆပ်ကပ်အဖွဲ့သားတွေ မြို့ရွာထဲမှာ ရောက်ရှိလာရင် မြို့ထဲမှာပဲ တည်ဆောက်ထားရှိရပါတယ်။ နောက် ရက်အနည်းငယ် စတည်းချ နေထိုင်ကြရပါမယ်။ အဲဒီနောက် ပြပွဲပြသပြီးချိန်မှာတော့ ပြန်လည်ထုတ်ပိုးပြီး အဲဒီနေရာက စွန့်ခွါလို့ တခြားအရပ်ကို ပြောင်းရွေ့ကြရ ပြန်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီဆက်ကပ်ရုံမှာ ဆပ်ကပ်ပွဲကို လာရောက်ကြည့်ရှု့တဲ့ လူပေါင်းများစွာကို မိုးဒါဏ်၊ လေဒါဏ်၊ နေဒါဏ်တို့မှ လုံခြုံအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ရပါမယ်။ နောက်ပြီး ဆပ်ကပ်တဲကို တည်ဆောက်တပ်ဆင်ရာနှင့် ပြန်လည်ဖြုတ်ယူ သိမ်းဆည်းရာတို့မှာလည်း လွယ်ကူအောင် စီမံထားရပါမယ်။ နောက် သယ်ယူရလွယ်ကူအောင်ပါ စီမံထားရပါမယ်။ အမြင့်ကိုလည်း ကောင်းကင်ကြိုးဘား ကစားသူတွေအတွက် ကောင်းစွာပြသ ကစားနိုင်အောင် မြင့်မြင့်မားမား တည်ဆောက်ထားရပါမယ်။ အဲဒီတော့ ဆပ်ကပ်တဲ တစ်လုံးဟာ ကြီးမားရမယ်။ ရောင်သွေးစုံလင်စွာ ရှိနေရမယ်။
ဒါတွေအပြင် ဖြုတ်သိမ်း လွယ်ကူပြီး ထရက်ကား(ကုန်တင်ကား) သို့မဟုတ် ရထားလမ်းပေါ်မောင်းနှင်နိုင်သော ကားရထားတို့ဖြင့် သယ်ယူရွှေ့ပြောင်းနိုင်အောင် စီမံထားရပါမယ်။ ထို့အပြင် အကယ်၍ ကုန်တင်ကားကြီးရဲ့ မော်တာစက်ပစ္စည်းတစ်ခုခု ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလျှင်လည်း ကားဂိုထောင်အတွင်း ဆွဲယူပြင်ဆင်နိုင်အောင် ကားကြီးရဲ့ အရွယ်အစားကိုလည်း အဆောက်အအုံရဲ့ Function တစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားရပါမယ်။ ပုံသဏ္ဍာန်ဟာ ကားရဲ့အရှည်၊ အမြင့်အတိုင်း တည်ဆောက်ဖို့ နှင့် တံခါးများကိုလည်း ကားကြီး ဝင်ထွက်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နောက် ကားရဲ့ အောက်မှ စက်များပြုပြင်နိုင်ရန် အလုပ်သမားဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ Pit ကျင်းတစ်ခုလည်း ထားရှိရပါမယ်။ နောက် လေဝင်လေထွက် ventilation အထူးကောင်းမွန်အောင် air fans များ၊ Opening များ နှင့် Outlet များကိုလည်း ပြုလုပ်ထားရှိရပါမယ်။ အထက်ပါ လိုအပ်ချက်တွေ အားလုံးဟာ အဆောက်အအုံရဲ့ ပုံစံမှာ သက်ရောက်နေမယ့် အချက်များဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းပြောရရင် ဆက်ကပ်ပြပွဲတစ်ခုအတွက် အဓိကလိုအပ်တဲ့ အဆောက်အအုံကတော့ ကြီးမားပြီး၊ အရောင်အသွေးစုံလင်စွာရှိနေမယ့် တဲကြီးတစ်လုံးပါပဲ။
အခုပြောတဲ့ သဘောတရားအတိုင်းပင် အဆောက်အအုံများနှင့်ပတ်သတ်ပြီး Function မှ Form အပေါ်တွင် လွှမ်းမိုးမှု မည်မျှအထိရှိကြောင်းကို သိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
Louis Sullivan (September 3, 1856 – April 14, 1924) "father of skyscrapers" လို့ နာမည်ကျော်တဲ့ အမေရိကန် အာခီတတ်ကြီးက သူ့အန္တေဝါသိကဖြစ်တဲ့ Frank Lloys Wright ကို " Form follows function" ဆိုတဲ့စကားကို ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ အသို့ဆိုစေ အချို့ အဆောက်အအုံတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ Function တွေ ကောင်းမွန် အဆင်ပြေ သော်လည်းပဲ သူတို့ရဲ့ Form က အင်မတန်အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်နေတာ၊ ပုံတုံးကြီးဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ကဲ ကျနော်တို့တွေ Function ဆောင်တာ နှင့်ပတ်သတ်ပြီး လက်တွေ့ ကျနော်တို့ဝန်းကျင်မှာ ရှိတာတွေနှင့် ယှဉ်ထိုး နှိုင်းယှဉ်မယ် ဆိုရင် ဘယ်လောက်များများ စဉ်းစားမိကြပါမလဲ...။ ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင်.. ခဲချွန်စက် တစ်ခုမှာ ခဲတံချွန်ဖို့ ဓါးလေး မပါဘူးဆိုရင်၊ အမှိုက်တောင်းတစ်ခုမှာ အောက်ခံမပါဘူးဆိုရင်၊ သွားတိုက်တံတစ်ခုမှာ သွားတိုက်ဖို့ အမွှေးကြမ်းတွေ မပါဘူးဆိုရင်၊ နောက် ဥပမာ တစ်ခုအနေနဲ့ အိမ်တစ်လုံးမှာ အမိုးမပါခဲ့ဘူးဆိုရင် အစရှိတဲ့ အဓိကလိုအပ်ချက် ဆောင်တာတွေ မပါတဲ့ ကိရိယာတွေ၊ ပစ္စည်းတွေကို စဉ်းစားမိကြမှာပါ။ ဒါဆိုရင် ဆောင်တာ ဆိုတာ ဘယ်လိုအရာလဲ ဆိုတာ ပိုပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကျနော် အရင်က ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို တည်ဆောက်ခြင်း(Built Environment) မှ The Three Bears ပုံပြင်မှ ပစ္စည်းများကို မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်...။ အဲဒီထဲမှ အချို့ ပစ္စည်းတွေဟာ ဇာတ်ဆောင် ဂိုဒီလော့လေးအတွက် အဆင်မပြေဖြစ်နေပြီး အသုံးမဝင်ပါဘူး။ အချို့ပစ္စည်းတွေဟာတော့ သူမနှင့် အံဝင်ခွင်ကြ သင့်တော်နေတာကိုတွေ့ နိုင်မှာပါ။ ဘယ်ပစ္စည်းတွေဟာ သူမနှင့် အဆင်ပြေခဲ့တယ်ဆိုတာ မှတ်မိပါသလား။ အဲဒီသူမနှင့် အဆင်ပြေတဲ့ ပစ္စည်းတွေဟာ သူမအတွက် သူမရဲ့ အရွယ်အစားနှင့် ကိုက်ညီပြီး သူမလိုအပ်ချက်နှင့် ပြည့်စုံတဲ့ ပစ္စည်းတွေပါပဲ။ အဲဒီတော့ အဲဒီပစ္စည်းတွေဟာ သူမအတွက် Functional things တွေလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ တနည်းပြောရရင်
အသုံးဝင် အသုံးကျတဲ့ ပစ္စည်းတွေလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တခါတရံမှာ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်း materials တွေကလည်း အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို အသုံးပြုလို့ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတာ လွှမ်းမိုးတတ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် ခေါင်းအုံးတွေကို သံမဏိနှင့် ပြုလုပ်ထားမယ်ဆိုရင် အဘယ်သို့ ရှိမလဲ။ အင်မတန် အိပ်လို့ ကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါသလား။ နောက် သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ တံခါး၊ ပြူတင်းပေါက်များ ဆိုရင်ရော အဆင်ပြေကြပါမလား။ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ရော ဘာကြောင့်များ အဆင်ပြေကြပါသလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားနိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းက သုံးစွဲသူရဲ့ လိုအပ်ချက်နှင့် အဆင်ပြေ ကိုက်ညီဖို့လိုအပ်နေလို့ပါပဲ။
ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကို Function ကြောင့် ဘယ်လိုတည်ဆောက်ထား ကြသလဲ...ဆိုတာကိုလည်း စဉ်းစားတွေးတော ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဆရာတစ်ယောက် သို့မဟုတ် အကြီးအကဲတစ်ယောက် ထိုင်တဲ့ ဆုံလည်ကုလားထိုင်တစ်လုံးရဲ့ Form ဆိုရင် Function အနေဖြင့် အဆင်ပြေမည်လား။
ပုံမှာပြထားတဲ့ လေယျာဉ်ပျံတစ်စင်းရဲ့ ပုံစံကိုကြည့်ပြီး သူ့ရဲ့ Function ဟာ သူ့ရဲ့ Form ကိုလွှမ်းမိုးမှု ရှိမရှိဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါအုန်း…။
အထက်က ပုံမှာပြထားတဲ့ ချီကာဂို မှာရှိတဲ့ ဗိသုကာ Skidmore, Owings and Merrill (SOM) ရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ Willis Tower (formerly named, and still commonly referred to as Sears Tower) ရဲ့ Form ကို သူ့ရဲ့ Function က ဘယ်လို လွှမ်းမိုး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေပါသလဲ။ အဲဒီအဆောက်အအုံကြီး လှပခန့်ညားတယ်လို့ ထင်ပါသလား။ အဲဒီအဆောက်အအုံဟာ ပြိုင်စံရှားလှတဲ့ ဗိသုကာကြီးရဲ့ Rectangular tubes ပုံတွေကို စုစည်းထားတဲ့ အိုင်ဒီယာကို တည်ဆောက်မှုမှာ အသုံးပြုထားခြင်းပါပဲ။ Rectangular tubes ကြီးများ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု အားပေးထောက်ကူထားတဲ့ ပုံမျိုးပေါ်နေပါတယ်။ အခြားသော အဆောက်အအုံများမှာလည်း အလားတူ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်....။
အခု Function ဆောင်တာ အကြောင်းပြောရင်း ဆောင်တာအပေါ်မှာ ဘယ်လောက်အထိနားလည်လိုက်သလဲ ဆိုတာမေးခွန်းလေးတွေ မေးကြည့်ပါမယ်...။ မူရင်းစာအုပ်မှ ရေးသားထားသော ဥပမာများအတိုင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Function is to form as fire/heat is to ________ . (Chimney, firebrick, etc.)
2. How it look and how you use it are the same as its ________. (Form)
3. Form is to function as __________ is to lawn sprinkler. (Horse, pipe, spout)
4. Form is to function as __________ is to __________ .
စဉ်းစား အဖြေရှာရင်း Function အကြောင်းပိုမိုနားလည် နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အိမ်တစ်လုံးကို Function နှင့် Form ကို ကောင်းမွန်စွာ ဆက်စပ်ဖွဲ့စည်းထားသော ဒီဇိုင်းလေးတစ်ခုကို လေ့ကျင့်ရင်း လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။ အဲဒီအိမ်လေးဟာ အသုံးလည်း ဝင်ရမှာ ဖြစ်သလို ကြည့်ပျော်ရှု့ပျော် ဖြစ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။ အဲ.. နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ ပစ္စည်းများမှ တချို့ပစ္စည်းများကို ပြန်လည် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ကြည့်ပါ...။ တစ်ခုသတိထားရမှာက အဲဒီပစ္စည်းကို သင်ဘယ်လိုအသုံးပြုတယ် ဆိုတာကို လစ်လျူရှု့ထားလိုက်ပါခင်ဗျာ။ အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုပ်ရာမှာ အဲဒီ ဒီဇိုင်းရဲ့ Function အသုံး သို့မဟုတ် ဆောင်တာနှင့် Form ပုံသဏ္ဍာန် တို့ ယှက်နွယ်ပေါင်းစပ်မှုကို စိုးရိမ်ပူပန်မနေပဲ ရဲရဲသာ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ဖို့ပါပဲ ခင်ဗျာ။
Posted by MTZO at 11:20 PM No comments:
ဒီဇိုင်း နှင့် အိုင်ဒီယော်လိုဂျီ (Design and Ideology)
ချားစ်ဒါဝင်ရဲ့ အီဗော်လူးရှင်း သီအိုရီအရ လူသည် မျောက်နှင့် မျိုးစိတ်တူသောသတ္တဝါ တစ်မျိုးဟု ဆိုခဲ့သည်။ ဘာသာရေးအသီးသီးမှလည်း လူ၏ဖြစ်တည်ရာကို အမျိုးမျိုးဆိုခဲ့ကြသည်။ မည်သို့ဆိုစေ သတ္တလောက၌ လူ၏ တည်ရှိနေမှု ကဏ္ဍသည် မှေးမှိန်သွားခြင်းမရှိခဲ့။ မည်သည့်နေရာမှ ဖြစ်တည်လာခဲ့ပါစေ လူဟူသော သက်ရှိတစ်မျိုးသည် သတ္တလောကအတွင်း တည်ရှိနေသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓအလိုအရ စင်္ကြဝဠာတစ်ခွင်ရှိ သတ္တဝါများ အားလုံးအတွင်း လူသားဘဝသည်သာ အမြင့်မြတ်ဆုံး အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ထိုအမြင့်မြတ်ဆုံးသော လူသားသည်ပင် လောကကို အကျိုးပြုနိုင်သလို၊ လောကကို ပျက်စီးအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပေသည်။ လောကရှိ သက်ရှိ သတ္တဝါအားလုံး၌ တူညီသော လိုအပ်ချက်များ ရှိပေသည်။ ထိုအရာတို့မှာ စားရေး၊ ဝတ်ရေး၊ နေထိုင်ရေး နှင့် ဘေးကင်း လုံခြုံရေးများပင် ဖြစ်သည်။ ထိုလိုအပ်ချက်များမှာ မရှိမဖြစ် အခြေခံများပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အခြားသက်ရှိတို့နှင့် မတူကွဲပြားသော လိုအင်ဆန္ဒများမှာ လူသားတို့၌ သိသာထင်ရှားစွာ ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ထိုဆန္ဒမှာ အခြေခံ လိုအပ်ချက်အပေါ်မှာ မူတည်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သလို အချို့မှာ စိတ်ခံစားမှုအတွက် ပေါ်ပေါက်လာတတ်သော လိုအင် ဆန္ဒများ ဖြစ်သည်။ ထိုလိုအင်ဆန္ဒများမှ လူသားတို့၏ ထွေပြားဆန်းကျယ်သော စိတ်ကူး အကြံဉာဏ် ကွန့်မြူးမှုဖြင့် အမျိုးမျိုးသော တီထွင်မှုများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ လူသားတို့၏ လိုအင်မှ စိတ်ကူး အကြံဉာဏ်များ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီး ထိုဖြစ်ပေါ်သော အကြံအစည် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန် ဒီဇိုင်းများမွေးဖွားခဲ့ကြသည်။ အတွေးအခေါ်သစ်များ ထွေးပွေ့ခဲ့ကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ဒီဇိုင်းနှင့် အိုင်ဒီယာဆိုသောစကားလုံးနှစ်လုံးကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာအတော်များများ ရင်းနှီးနေကြသည်။ ဒီဇိုင်း ဆိုသည့်အဓိပ္ပါယ်ကို အတိအကျ မသိကြသော်လည်း အလွယ်တကူ သုံးစွဲနေတတ်ကြသည် ။ Oxford အဘိဓါန်၌ ဒီဇိုင်း ဆိုသည်ကို “ A plan or drawing produced to show the look and function of something before it is built or made (or) The art or action of planning the look and function of something (or) The arrangement of the features of an artifact ” ဟုလည်းကောင်း “A decorative pattern (or) The purpose or planning that exists behind an action or object” ဟုလည်းကောင်း၊ “Decide upon the look and functioning of something, especially by makingadetailed drawing of it (or) do or plan (something) withaspecific purpose in mind” ဟုလည်းကောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
ခေတ်သစ် အင်္ဂလိပ်မြန်မာ အဘိဓါန်မှာ
၂။ အနုပညာလုပ်ငန်းအတွက် အကြမ်းစီမံဖော်ပြသည်။
၃။ လိုရင်းအကြောင်း ပြီးမြောက်အောင် ဖန်တီးသည်။ ရည်ရွယ်သည်။ ကြံရွယ်သည်။ ရည်စူးသည်။
၄။ စီမံ-သတ်မှတ်သည်-လျာထားသည်။ မှန်းထားသည် ဟုလည်းကောင်း၊
၂။ အနုပညာလုပ်ငန်းအတွက် အကြမ်းစီမံဖော်ပြချက်- အတိုချုပ် စီမံဖော်ပြချက်။
၃။ အဆောက်အအုံ-ဆွဲ ရေးထားသည့်ပုံ- ထုထားသည့် အရုပ်- အစီအစဉ်ဖွဲ့စည်းပုံ- အနေအထား အချိုးအစားကျပုံ။
၄။ အကြံအစည်။ စီမံထားခြင်း။ ကြံစည်ဖန်တီးထားခြင်း။
၅။ တမင်တကာ-ရည်မှန်းထားခြင်း- ရည်ရွယ်ထားခြင်း။
၆။ မကောင်း-အကြံအစည်-အကြံအရွယ် ဟုလည်းကောင်း အဓိပ္ပါယ်များဖွင့်ဆိုထားသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။
အိုင်ဒီယော်လိုဂျီ ကို Oxford အဘိဓါန်၌ “A system of ideas and ideals forming the basis of an economic or political theory (or) The set of beliefs characteristic ofasocial group or individual ဟုလည်းကောင်း၊ Archaic the study of the origin and nature of ideas” ဟုလည်းကောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ Wikipedia တွင်တော့ အိုင်ဒီယော်လိုဂျီကို “An ideology isaset of ideas that constitutes one's goals, expectations, and actions” ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသေးသည်။
ခေတ်သစ် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓါန်တွင် နာမ် အဖြစ်-
၁။ လူ့ စိတ်ကူး စိတ်ကမ်း အခြေပြုရာ အကြောင်းအချက်။ အယူအဆ ယုံကြည်စွဲမြဲချက်များ။
၃။ စိတ်ကွန့်မြူးတွေးဆချက် ဟု အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
အဘိဓါန်များအတွင်း ဖွင့်ဆိုချက်များအပေါ် ဆက်လက် ဆင်ခြင်တွေးတောလိုက်လျှင်ဖြင့် ဒီဇိုင်းနှင့် အိုင်ဒီယော်လိုဂျီတို့၏ ဆိုလိုချက်များကို ပုံဖော်နားလည်သွားနိုင်ပါမည်။ ဆက်လက်၍ အဘိဓါန်၏ ယေဘုယျ အချက်တွေအပြင် အခြား အတွေးပွားနိုင်သည်မှာ အင်ဂျင်နီယာ ပညာရပ်နှင့် ဗိသုကာပညာရပ်တို့တွင် ဒီဇိုင်းသည် မည်သည့်အပိုင်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နေသနည်း။ အိုင်ဒီယော်လိုဂျီတို့သည် ဒီဇိုင်းသည် မည်သည့်အပိုင်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နေသနည်း ဆိုသည့် အတွေးများဖြစ်သည်။
စင်စစ် ဒီဇိုင်းဆိုသည်မှာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုအတွက် တိကျသေချာ အသေးစိတ်သော အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်။ သွားရောက်လိုတဲ့ ပန်းတိုင်တစ်နေရာမှ ပေးစွမ်းမယ့် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ခံစားလိုမှု။ စိတ်အဆာ၏ လိုအပ်ချက်ကို ပြည့်စုံစေမှု။ စည်းချက်ညီညီ ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှု။ အကန့်အသတ်မရှိ လွင့်ထွက်သွားနိုင်သော ဖန်တီးမှု စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ခံစားသိမြင်နိုင်ပါသည်။ ဖန်တီးသူတစ်ဦးမှ ပြောပြလိုသော သီးခြား ခံစားမှု သို့မဟုတ် ခံစားမှု အဖုံဖုံကို ဒီဇိုင်းများမှ ရရှိနိုင်သည်။ ဒီဇိုင်းတစ်ခု အတွင်းမှာပင် အတွေးအမျိုးမျိုး ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဒီဇိုင်းကို သွင်ပြင်ခွဲ၍ ဆိုလျှင် ဒီဇိုင်းသည် ဘာသာဗေဒ အကန့်အသတ်မရှိ။ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အတွေးအခေါ်အမျိုးမျိုးသည် ဒီဇိုင်းတွင် ရှိနေသည်။ ဒီဇိုင်းတွင် လမ်းခွဲအမျိုးမျိုးမှ ချဉ်းကပ်လာမှုများ ရှိသည်။ ဒီဇိုင်းတွင် လက်ဆင့်ကမ်း ဆင်းသက်လာတဲ့ သုခုမရသတွေ ရှိသည်။ တိုးထွက် ဖောက်ထွက်လာတဲ့ အနုပညာတွေ ရှိသည်။ နည်းစနစ်တကျ တွေးခေါ်ပေးရတာတွေ ရှိသည်။ ထို့အပြင် ဒီဇိုင်းတွင် စီးပွားရေးအတွက် တွက်ခြေကိုက် လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ရှိသည်။ လှုမှုဗေဒ လိုအပ်ချက်အပေါ် အဖြေရှာမှုတွေရှိသည်။ လိုအပ်ချက်အပေါ် သုတေသန ပြုလုပ်ရတာတွေ ရှိသည်။ အတွေးခံစားချက်ကို ဖော်ထုတ် ပေးရတာတွေ ရှိသည်။ ဖန်တီးမှုအတွေးကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရတာတွေ ရှိသည်။ ခြုံ၍ ဆိုရပါလျှင် ဒီဇိုင်းသည် အရာအားလုံးကို စနစ်တကျ ချိန်ညှိပေးရခြင်းဟု ဆိုရပေမည်။
အိုင်ဒီယော်လိုဂျီအား ယေဘူယျဆိုရပါလျှင် အတွေးအမြင် သဘောတရား အယူအဆလို့ ဆိုနိုင်ပါမည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် အခြေခံကျတဲ့ သဘောတရားတွေနဲ့ သီအိုရီတွေ အမျိုးမျိုး ဖော်ထုတ်ကြသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် သူတို့ပြုလုပ်မယ့် ဒီဇိုင်းနဲ့ တည်ဆောက်ရေး လိုအပ်ချက်အတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော သင့်တော်မည့် သီအိုရီများကို စနစ်တကျ အသုံးပြုကြသည်။ ဗိသုကာများသည် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ နေထိုင်နိုင်ရန် ကြံစည်တွေးတော အဖြေရှာကြပါသည်။ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး အသိပညာရှင်များသည် လူသားတို့အတွက် လိုက်နာ စောင့်ထိန်းအပ်တဲ့ ကျင့်ဝတ်၊ သိက္ခာ၊ လူမှုဘဝ တိုးတတ် ကြီးပွားရေး တတ်ကျမ်းများ၊ နီတိ အစရှိသည်တို့ကို တွေးတော အဖြေရှာ စူးစမ်းဖော်ထုတ် လေ့လာကျင့်သုံးရန် လမ်းညွှန်ပြင်ဆင်ကြတယ်။ နိုင်ငံရေးသုခမိန်များ၊ ဘောဂဗေဒ စီးပွားရေးပညာရှင်များသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ လူမျိုးတစ်မျိုး၏ နိုင်ငံရေးနည်းဗျူဟာနှင့် စီးပွားရေးနည်းဗျူဟာတို့အပေါ် ကြံစည် တွေးတောတတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် လူသားအားလုံး၏ အတွေးအမြင် အကြံအစည် အားလုံးသည် အတွေးဗေဒ အိုင်ဒီယော်လိုဂျီဆိုသော ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ကိန်းဝပ်နေသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ဒီဇိုင်းဆိုသည်မှာ အိုင်ဒီယော်လိုဂျီ၏ ကုန်ထွက်တစ်မျိုးဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ အတွေးအမြင်မပါသော ဒီဇိုင်းသည် ဆားမပါသော ဟင်းတစ်ခွက်နှင့်တူသည်။ အတွေးအမြင်တစ်ခုသည် ဘက်စုံဒေါင့်စုံ ပြည့်စုံနိုင်ရန် ခဲယဉ်းသကဲ့သို့ ဒီဇိုင်းတစ်ခုသည်လည်း အရာအားလုံးအတွက် ကုံလုံပြည့်စုံစေမှုပေးနိုင်ရန် မလွယ်ကူလှချေ။ အတွေးတစ်ခုကို အကျိုးအကြောင်း တွေးဆနိုင်သကဲ့သို့ ဒီဇိုင်းတစ်ခုတွင်လည်း ကျိုးကြောင်းပြည့်စုံသော အဓိပ္ပါယ်ကို ပေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ အတွေးတစ်ခု၏ အမှန်အမှားဆိုသည်ကို ရလာဒ် အကျိုးအမြတ်နှင့် တိုင်းတာသကဲ့သို့ ဒီဇိုင်းတစ်ခု၏ အမှန်အမှားဆိုသည်ကိုလည်း ထိုဒီဇိုင်းမှ ရရှိသော ရလာဒ်ဘောင်နှင့် ချိန်ညှိုရပါသည်။ အတွေးအမြင် တစ်ခုသည် ပြဿနာတစ်ခုမှ ဖြစ်တည်လာနိုင်သကဲ့သို့ ဒီဇိုင်းတစ်ခုသည်လည်း ဖြေရှင်းရမည့် ပြသနာအတိမ်အနက်အတွက် နည်းစနစ်တစ်ခု ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။ အတွေးတစ်ခု၏ ရင်းမြစ်သည် ဘာကြောင့်ဖြစ်လာသည်ဆိုသော မေးခွန်းမှ ဖြစ်တည်လာသကဲ့သို့ ဒီဇိုင်းတစ်ခုသည်လည်း ဘာကြောင့် ဖြစ်လာရသလဲဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ်တော့ ရှိရပါမည်။ နောက်ဆုံး အတွေးတစ်ခု၏ ဦးတည်ချက်သည် သေချာတိကျမှသာ တန်ဖိုးရှိနိုင်သကဲ့သို့ ဒီဇိုင်းတစ်ခုသည်လည်း ဘယ်ကို ဖြစ်သွားရမလဲဆိုသော ဦးတည်ချက် ရှိနေမှသာ ထိုဒီဇိုင်း၏ အနှစ်သာရကို ခံစားသိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်သည်။
ဒီဇိုင်းတစ်ခု ကောင်းသည် မကောင်းသည် ဆိုသည်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိခြင်း၊ အဓိပ္ပါယ် ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်း၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိခြင်း၊ မှန်ကန်သော စည်းစနစ် ရှိခြင်း စသော အချက် ငါးချက်ဖြင့် အကြမ်းဖျဉ်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းနှင့် အိုင်ဒီယော်လိုဂျီတို့သည် သိမ်မွေ့သော အသိပညာ၊ နက်ရှိုင်းသော အတတ်ပညာများ ဖြစ်သကဲ့သို့ ခန့်ညားသော၊ ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ အနုပညာတစ်ရပ်ဟု ဆိုလျှင်လည်း မမှားနိုင်ချေ။ ကျွန်တော်တို့ လူသားအားလုံးသည် မည်သည့်နေရာမှ ဖြစ်တည်လာခဲ့ပါစေ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုသည် အခြား လူသားများအပေါ် ထိခိုက် နစ်နာခြင်းမရှိစေသော၊ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အကျိုးမမဲ့သော အတွေးအမြင်အသိပညာ အတတ်ပညာတို့ဖြင့် တန်ဖိုးရှိသော၊ လှပခန့်ညားသော၊ လူသားတစ်ယောက်အဖြစ် မိမိကိုယ်ကို ပုံဖော်ရေးဆွဲ ထုဆစ်နိုင်သော လူသားဒီဇိုင်းတစ်ခုအဖြစ် မိမိကိုယ်ကို ဖန်တီးနိုင်ကြသည်။ ဟင်းလင်းပြင် တစ်ခုအတွက် ဖြစ်ပေါ်လာသော အတွေးအမြင်၊ အသိ၊ အယူအဆ၊ တန်ဖိုးထားမှု၊ နားလည်မှု၊ ယုံကြည်မှု၊ လက်ခံလိုက်မှု၊ အသုံးချမှု၊ လွင့်မြောမှု၊ အိပ်မက်ဆန်မှု၊ ထိတွေ့မှု စသည့် မနောဝိဉာဉ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမိသော စိတ်ခံစားမှုတွေကို ပုံဖော်တင်ပြနိုင်သည့် ဒီဇိုင်းဆိုသည်ကို တီထွင်ဖန်တီးရင်း ကျွန်တော်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကို တတ်စွမ်းသမျှ ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ကြပါစို့။
Posted by MTZO at 10:13 PM No comments:
"Design Ideology ဖိုရမ်မှ “24” နာရီ တံခါးဖွင့် ကြိုဆိုနေပါသည်"
သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေက အခြေခံကျတဲ့ သဘောတရားတွေနဲ့ သီအိုရီတွေ အမျိုးမျိုးဖော်ထုတ်ကြပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ ဗိသုကာတွေ၊ ဒီဇိုင်းပညာရှင်တွေကတော့ သူတို့ပြု...လုပ်မယ့် ဒီဇိုင်းနဲ့ တည်ဆောက်ရေး လိုအပ်ချက်အတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ သင့်တော်မယ့် သီအိုရီတွေကို စနစ်တကျ အသုံးပြုကြပါတယ်။ Design Ideology ဖိုရမ်ဟာ သီအိုရီ အမျိုးမျိုးအပေါ် ကွဲလွဲချက်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ဘဲ အသုံးပြုမယ့် အခြေအနေအလိုက် လိုအပ်ချက်တွေကို ဆွေးနွေးနိုင်စေရန်။
ဗိသုကာပညာရပ် နှင့် မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များဟာ လူသားတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် လုံခြုံစွာနေထိုင်ဖို့ အကာအရံ တစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်၊ လူ့ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုလုံးအတွက် ချန်ထားရစ်ခဲ့မယ့် သမိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ဘယ်လို အသုံးပြုကြမလဲဆိုတာ အဖြေရှာနိုင်စေရန်။
ဟင်းလင်းပြင်အတွက် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အတွေးအမြင်၊ အသိ၊ အယူအဆ၊ တန်ဖိုးထားမှု၊ နားလည်မှု၊ ယုံကြည်မှု၊ လက်ခံလိုက်မှု၊ အသုံးချမှု၊ လွင့်မြောမှု၊ အိပ်မက်ဆန်မှု၊ ထိတွေ့မှု စတဲ့ မနောဝိဉာဉ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမိတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေ အားလုံးအတွက် အဖြေရှာကြည့်နိုင်စေရန်။
ပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်း စိုပြည် သာယာနေခြင်းဟာ လူသားတို့အတွက် နေ့စဉ်လူမှု ဒုက္ခ အထွေထွေမှ တဒင်္ဂကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိနိုင်စေပါတယ်။ အဲဒီလို စိမ်းလန်း စိုပြည် လှပမှုတွေကို မြေခင်းပညာရှင်များက ဖန်းတီးတည်ဆောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမြေခင်းအလှဆင်ပညာရပ်ရဲ့ အရေးပါ အသုံးဝင်မှုကို လေ့လာနိုင်စေရန်။
အတွေ့အကြုံတွေဆိုတာ စာတွေ့နဲ့ လက်တွေ့ ကွာဟချက် တွေကိုလည်း ချိန်ညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ သီအိုရီတိုင်းဟာ သက်ဆိုင်ရာ သက်သေပြချက်တွေနှင့် ပြီးပြည့်စုံနေပြီလို့ ထင်ရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့အသုံးပြုဖို့ ဆိုတာကတော့ သူ့ကို သေချာနားလည်ရုံနဲ့ ပြည့်စုံနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ စနစ်တကျ အသုံးချတတ်ဖို့နဲ့ အသုံးချစဉ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အကောင်းအဆိုး အကြောင်းအကျိုးကိုလည်း နားလည်၊ ဖြေရှင်း၊ ချိန်ညှိနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနေရာလေးဟာ လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်များမှ ရရှိလာတဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ အသိအမြင်၊ အတွေးအခေါ်များကို အဖြေရှာဆွေးနွေးနိုင်စေရန်။
ပြတိုက်တစ်ခု မဟုတ်ပေမယ့် Design Ideology ဖိုရမ်မှာ အနာဂတ်ရဲ့တေးကို နားဆင်နိုင်သလို အတိတ်တချိန်က ထားရစ်ခဲ့တဲ့ ပညာရပ်တွေကိုလည်း မျှော်ကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်တဲ့အခါ လိုက်နာရန် လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်များနဲ့ ကျင့်ဝတ်သဘောတရားများကို သိရှိနိုင်ပြီး ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် တို့ကိုလည်း မှတ်သားနာယူ နိုင်စေရန်။
တစ်ယောက်ရဲ့ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆကို အခြားတစ်ယောက်က ပြောင်းလဲပေးခြင်းထက် နေရာ၊ ဒေသ၊ ကာလ အလိုက် မတူညီနိုင်တဲ့ အခက်အခဲနဲ့ လိုအပ်ချက်များအပေါ် ဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်စေဖို့။
အစရှိသော ရည်ရွယ်ချက်ပေါင်း များစွာဖြင့် Design Ideology ဖိုရမ်ကို ဖန်တီးတည်ဆောက် ခဲ့ပါတယ်။
အထက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဝါသနာတူ ညီအကို မောင်နှမများအား နွေးထွေးလှိုက်လှဲုစွာ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ မည့်သည့်နေရာဒေသမှ ဖြစ်စေ၊ လာရောက်သော ဝါသနာတူ မောင်နှမများကို ကျနော်တို့ Design Ideology ဖိုရမ်မှ 24 နာရီ တံခါးဖွင့် ကြိုဆိုနေမည် ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by MTZO at 3:46 PM 1 comment:
ဝန်းကျင်ထဲက ဗိသုကာ (Architecture in Environment)
ဒီပိုစ့်မှာ ပထမဆုံးပြောချင်တာက Environment ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာဘာလဲက စလိုက်ပါမယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ ဘာလဲမေးရင် ကိုယ်နေတဲ့နေရာပေါ့ လို့အလွယ်ဖြေမိမယ်ထင်ပါတယ်။ Wiki မှာတော့ Environment အကြောင်းကို “In general, environment refers to the surroundings of an object.” လို့ဆိုထားပါတယ်။ နောက်ထပ်ပြီး
* The natural environment, all living and non-living things that occur naturally on Earth
* Built environment, constructed surroundings that provide the setting for human activity, ranging from the large-scale civic surroundings to the personal places
* Environment (biophysical), the physical and biological factors along with their chemical interactions that affect an organism
* Environment (systems), the surroundings ofaphysical system that may interact with the system by exchanging mass, energy, or other properties
* Environmental art
* Environmental determinism
* Environmental science, the study of the interactions among the physical, chemical and biological components of the environment
* Environments (series) A series of LPs, cassettes and CDs depicting natural sounds
* Knowledge environment
* Social environment, the culture that an individual lives in, and the people and institutions with whom they interact
ဆိုပြီး Environment ကိုအမျိုးအစားတွေ ခွဲခြားထားပြန်ပါသေးတယ်….။
အမှန်တကယ်ဆိုရရင် Environment ဆိုတာ အတော်လေးကိုကျယ်ဝန်း၊ များပြားပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်တွေ (မြေယာတည်ဆောက်ပုံ၊ တောင်ကုန်းတောင်တန်း ကွန်တိုအနိမ့်အမြင့်) စတာတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသမျိုးစုံမှာရှိတဲ့ သက်ရှိတိရစ္ဆာန်မျိုးစုံ၊ လူသားတွေ ဖန်တီးထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအဆောက်အအုံတွေ၊ မြေကွက်ဟင်းလင်းတွေမှာ ပြုလုပ်ထားတဲ့ လူထုဆိုင်ရာ အပန်းဖြေပန်းခြံ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ စတာတွေနှင့် ရာသီဥတုတွေ အစရှိတာတွေ အကုန်လုံးဟာ Environment ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာနှင့် အကြုံးဝင်နေတာပါ….။ အဲဒီတော့ ဗိသုကာတစ်ယောက်ဟာ Structure တစ်ခု Planning လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် Environment ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အရေးပါမှုကို လစ်လျှူရှုမထားသင့်ပါဘူး။ ဗိသုကာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားမှု တစ်ခုဟာ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဆက်စပ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲလိုဆက်စပ်မှုမှာ သူ့ဘာသာ သီးခြားရပ်တည် တည်ရှိနေနိုင်တာလည်း ရှိသလို သူ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာဖြစ်ပြီး ဟာမိုနီဖြစ်နေတာမျိုးလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ အနှေနှင့် ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာတွေ၊ လက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ နေရာတွေမှရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေများတွေ့နိုင်ပါသလဲ။ တော၊ တောင်၊ သစ်ပင်၊ ပန်းပင်၊ နောက်အနီးပတ်ဝန်းကျင်က မြို့ကြီး၊မြို့ငယ်တွေ၊ ကျေးရွာတွေ၊ မြို့ရွာအတွင်းက ဈေးဆိုင်တွေ၊ ဆူပါမားကတ်တွေ၊ အိမ်ကြီးတွေ၊ အိမ်လေးတွေ၊ စက်ရုံကြီးတွေ၊ စက်ရုံလေးတွေ စတာတွေကို သတိပြုစဉ်းစားမိပါလား။ အဲဒါတွေကို စိတ်ဝင်တစား လေ့လာမိဖူးပါသလား။ အဲဒီမှာ ဗိသုကာတွေ ဖန်တီးထားတဲ့ အဆောက်အအုံတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာ အဘယ်မျှအသားကျနေသလဲ။
အဲဒီအဆောက်အအုံဟာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟာဇာတဖြစြ်ပီး ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလွမ်းမိုးနေသလား။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဘယ်မျှ သက်ရောက်မှုရှိသလဲ ဆိုတာတွေ လေ့လာကြည့်ရမှာပါ။ ဥပမာအနေနှင့် New York City’s Mahanttan section တည်ဆောက်မှု နှင့် Log Cabin တို့ နှစ်ခုအကြား Unity ဖြစ်မှု၊ နောက် 110-storey skyscraper နှင့် Yellowstone National park စတာတွေရဲ့ ပေါင်းစပ်မှုတွေဟာ အင်မတန်နည်းပါးပါတယ်။ အဲဒီတော့ Log Cabin ဟာ New York City ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင် မသင့်လျှော်သလို skyscraper တွေကို Yellowstone National park မှာ ထည့်မယ်ဆိုတာမျိုး ဟာလည်း လုံး၀မဆီလျှော်တဲ့ ဟာပါ။
New York City’s Mahanttan Section
အခြားအလားတူပုံစံတွေကို ဥပမာဆိုရမယ် ဆိုရင် Tree Forgs လို့ခေါ်တဲ့ မိုးများသစ်တောတွေမှာ နေတတ်တဲ့ သစ်ပင်တတ် ဖားပျံတွေကို သဲကန္တာရမှာ ထားတာမျိုး၊
Horned toads လို့ခေါ်တဲ့ အပူပိုင်း သဲမြေမှာနေတဲ့ ဖားပြုတ်တစ်မျိုးကို မိုးများသစ်တောတွေမှာ ထားတာမျိုး၊
Igloos လို့ခေါ်တဲ့ နှင်းခဲအိမ် သို့မဟုတ် စနိုးအိမ်လေးတွေကို အီကွေတာရပ်ဝန်း ပူနွေးရာသီဥတုလိုနေရာမျိုးမှာ ဆောက်တာမျိုး၊
မြက်ခင်းတွေမှာ ဆောက်လုပ်တတ်တဲ့ Grass huts မြက်ခင်းတဲလေးတွေကို ဝင်ရိုးစွန်းဒေသမျိုးမှာ ဆောက်တာမျိုး၊
အစရှိတဲ့ အရာတွေဟာ အတော်လေးမဆီမလျှော် ပြုလုပ်ထားတဲ့ အဖြစ်တွေပါ။
နောက်ထပ် အခြားပြောရအုန်းမယ်ဆိုရင် တယောတွေကို ရော့ခ်တီးဝိုင်းမှာ ဘန့်တွေမှာတွေ့ရခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဂစ်တာကို ဆင်ဖိုနီအော်ချက်စထရာ ဝိုင်းတွေမှာ တွေ့ရခြင်းဟာ အတော်မဆီလျှော်သလိုတွေပေါ့။
ဒါဟာ သီအိုရီအရ ဗိသုကာပညာမှာ သတိထားသင့်တဲ့ မဆီလျှော်အောင်ဖြစ်တတ်တဲ့ အချက်တွေကို နားလည်သဘောပေါက်အောင် ပြောပြခြင်းပါ။ တကယ်တော့ နည်းပညာတိုးတတ်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ လူတွေရဲ့ တီထွင်ကြံဆမှုတွေကြောင့် အဲဒီမဆီလျှော်တာတွေကို လှပအောင် သစ်ဆန်းအောင် ဖန်တီးနိုင်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ တီထွင်ဆန်းသစ်သူတွေရဲ့ အံ့မခန်းပညာစွမ်းတွေနှင့် အဆင်ပြေအောင် ဖန်တီးနိုင်ခြင်းတွေပါ။
တည်ဆောက်မှုတွေမှာ ပတ်ဝန်းကျင့်နှင့် သဟဇာတမဖြစ်ပဲ ကွဲလွဲခြားနားနေတာဟာ ဘယ်အရာအတွေများဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။
ဆိုရရင် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ (Building Material) ၊ ဆောင်တာပြ ဒီဇိုင်း(functional Design)၊ ဥတုရာသီ (Climate)၊ မြေမျက်နှာသွင်ပြင် လက္ခဏာ(Topography)၊ လက်ရှိ Themes (Existing themes)တွေနှင့်၊ မြေခင်း Landscape တည်ရှိမှုတွေဟာ အထူးသဖြင့် ကွဲလွဲနိုင်တဲ့ အချက်တွေပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဗိသုကာဆက်စပ်မှုကို စဉ်းစားခြင်းဟာ သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဗိသုကာလက်ရာတို့ Unity ဖြစ်မှုကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ Unity ဆိုတာဟာ အနီးဝန်းကျင်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျပြီး ၊ အသုံးဝင်သော ဆောင်တာဖြစ်စေသည့် ဒီဇိုင်းအဖြစ် ဟာမိုနီဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ဖန်တီးနိုင်ခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့် ဒီဇိုင်းတစ်ခု၊ တည်ဆောက်မှုတစ်ခု ဖန်တီးတော့မယ် ဆိုရင် ကျနော်တို့တွေ မမေ့မလျော့ စဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်တစ်ခုဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာ မိမိဒီဇိုင်းဟာ ဘယ်လို အနေအထားမျိုးနှင့် တည်ရှိနေမလဲဆိုတာ သေချာစဉ်းစားရင်း function and fit ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်စေကြောင်း။
မှတ်ချက် ။ ။ Mood images များရှာပေးတဲ့ MTZO ကြီး ကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း…..
Posted by MTZO at 4:33 PM No comments: